पृथ्वीबाट उडेको झण्डै सात महिनापछी मंगल ग्रह पुगेको यानले पठाएको तस्बिर यस्तो छ ! —
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०४:२२ admin	0 Comments
काठमाडौँ : नासाले पठाएको अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको छ । ‘अमेरिकी पर्सिभिअरेन्स’ नाम दिइएको यानले शुक्रबार बिहान २ बजेर ४० मिनेटमा मंगल ग्रहको सतह छोएको हो । यो यान नासाले अमेरिकाबाट उडाएको झण्डै सात महिनापछि मंगल ग्रहमा पुगेको हो । मंगल ग्रहमा यानले सफल अवतरण गरेपछि नासाका वैज्ञानिकले एक अर्कामा खुशी साटेका थिए ।
लामो समयपछि मंगल ग्रहमा सफल अवतरण गरेको यो यानले मानिसको जीवन मंगल ग्रहमा सम्भव छ या छैन् ? भन्ने बारेमा थप अनुसन्धान गर्नेछ । यानले मंगल ग्रहको भुई छुने बित्तिकै तस्बिर पठाएको थियो । जहाँ बालुवा, ढुंगा र चट्टान देखिन्छन् । नासाले सन् १९७० देखि मंगल ग्रहमा मान्छेको जीवन सम्भव छ कि छैन ? भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघि यानले पठाएका तस्बिरमा माटो भिजेको देखिएपछि मंगल ग्रहमा पानी रहेको तथ्य नासामा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाले बाहिर ल्याएका थिए । पानी भेटिएपछि मंगल ग्रहमा मान्छेको जीवनको खोजी भइरहेको छ ।
← ग्रीनलाइफ हाइड्रोको आइपीओ बाँडफाँट : २ जना भाग्यमानीले पाए ११ कित्ता !
अस्ट्रेलियामा फेसबुकमा समाचार हेर्न तथा सेयर गर्न नपाइने ! →